Cnc machine Service, Steel vachikanda, Aluminum vachikanda - Grand
The kambani chakuvhuvhu design, kufa Kudzingwa uye CNC machine okudhindira, kushandisa akagadzira, kubudiswa uye kugadzirwa siyana simbi asiri mureza mativi uye mwero nhengo. The zvigadzirwa vanobatanidzwa muminda siyana dzakadai repair zvikamu, zvikepe, michina, nokurapwa, kwezvivako rutsigiro, fenicha midziyo, chishandiso Hardware, nezvimwewo, uye Anonyanyowanika kutengeswa kuUnited States, Japan, Italy, Canada, China uye dzimwe nyika .
Mushure anenge makore gumi kuwanda, tine mupfumi ruzivo mune michina mukugadzira. Tiri pa zvokukanda nonferrous nesimbi akadai mhangura, aruminiyamu, zinc alloys, uye kukwanisa muitiro zvakarurama zvigadzirwa. Panguva iyoyowo, kambani akagadza refu uye kugadzikana pamwe nevamwe ferrous simbi foundries uye pamusoro kurapwa miti akadai yakanamirwa pamifananidzo uye Anodizing, saka anogona kupa umwe-vanorega basa vatengi.
Mugodhi Ring Product Open Die Process Automatic H ...
High Quality Customized Mini Cardan mugodhi custo ...
High Quality Customized Mini Cardan mugodhi For A ...
OEM machine Aluminum Brass Stainless simbi Ge ...
Custom Made mhangura Kudzingwa zvikamu pamwe machine
Aluminum nati hexagonal waya richiswedera machine munhu ...
Pipe zvakakodzera Union Conical , Black nyore kufurirwa Iron Pipe Fitting , TM Pipe Fittings , Flat Pipe Fitting , 4 Way Pipe Fitting , High Pressure Y Pipe zvakakodzera Tee , All Products